"Education for Myanmar Youths": စာသင်ခန်းအတွင်း အထီးကျန်ဆန်မှု
Posted by မြန်မာကျောင်းဆရာ at 9:01 PM
It's niceapost item and article.
Recently, all society in the world are same.
We have to illuminate disaventage
I hope one day we can solve this problem.
တိုးတက်နေသောကမ်ဘာကြီးကို အမှီလိုက်ဖို.ရန် စွမ်းရည်ထက်မြတ်သော လူ.စွမ်းအရင်းအမြစ်မရှိဘဲနဲ.
တိုးတက်နေသောကမ်ဘာကြီးကို အမှီလိုက်ဖို.ရန် မဖြစ်
နိုင်ပါ။ စကတ်တို ဘောင်ဘီတို ၀တ်တာ တကယ်.ခေတ်မှီတာမဟုပ်ပါ၊